Nhau -Maitiro ekusarudza akasiyana thermometer senge thermometer yezeve uye thermometer yehuma?
Nzira yekusarudza ma thermometers akadai seyezeve thermometer uye thermometer yehuma?
Munguva iyi yenguva, tinonzwa kuti takayera tembiricha yemuviri wedu muhupenyu huno. Muchengeti anonyanya kunetseka nezvekushisa kwemuviri wako kupfuura amai vako. Wakaona here kuti kushandisa ma thermometers akasiyana mumamiriro akasiyana, mutsauko mukuyera hausi mudiki. Vanhu imhuka dzine ropa rinodziya, uye tembiricha yemuviri yakanyanya kana kuti yakaderera. Kurwara, uye dzimwe nguva unenge usina chokwadi chekuti uri kurwara zvechokwadi here. Saka tembiricha yemuviri yakakwira zvakadii sefivha? Rudzi rwese rwethermometer ine hasha dzayo. Unogona kuzvinzwisisa here?
1. Kupisa kwemuviri hakuna kugadziriswa, pane kusiyana kwekushisa pakati pemangwanani nemanheru
Kupisa kwemuviri wemuviri wemunhu une hutano hausi nguva dzose 37 degrees. Mumamiriro ezvinhu ane hutano, sekudya kwakajairika uye zvipfeko zvakakodzera, tembiricha yemuviri wemunhu inongogara isingachinji, kureva kuti, inochengetwa pa37 degrees Celsius (inenge pakati pe36.2 degrees Celsius uye 37.2 degrees Celsius). Mukati merudzi urwu, tembiricha yemuviri yakadzikira pa2 kusvika 5 mangwanani uye yakakwirira pa5 kusvika 7 masikati, asi musiyano wetembiricha mukati mezuva unofanirwa kunge uri pasi pe0.8 ℃.
2. Kusiyana kwekushisa kwemuviri wemunhu kwakasiyana
Kupisa kwemuviri wevakadzi kunowanzoita 0.35 ℃ yakakwirira kupfuura yevarume, uye tembiricha yemuviri wevakadzi inoshandukawo zvishoma panguva yekutevera. Tembiricha yakajairika yevacheche uye yevana vadiki muhapwa inosvika 0.3 ℃ yakakwirira kupfuura yevakuru. Mumamiriro ezvinhu akajairika, kutonhora kwemuviri wevana kwakakwirira kudarika kwevanhu vakuru, vanhu vakuru vakakwirira kudarika vakwegura, vakadzi vakakwirira kupfuura varume; tembiricha yemuviri yakakwira panguva yekurovedza muviri kwakasimba kupfuura kana kwakanyarara.
3. Matemometa emakiriniki akasiyana ane mwero uye nzira dzekushandisa dzakasiyana
01 Nzeve Thermometer
Inokodzera mhuri dzine vacheche. Kazhinji, tembiricha yezeve yakakura kudarika kana yakaenzana ne38 degrees yefivha. Zvakanakisisa kugadzirisa nzeve imwe kuti iedze kana kutora chiyero chenzeve dzekuruboshwe uye dzekurudyi, asi kuvapo kwe earwax kuchakanganisa mhinduro dzebvunzo.
Vana vari pasi pemwedzi mitanhatu zera vanofanira kuterera kana vachishandisa thermometer yenzeve kuyera tembiricha yavo. Nzeve yavo ipfupi, iyo inogona kukuvadza netsaona nzeve yemwana.
02 Huma thermometer
Kutarisa tembiricha yemuviri munzvimbo dzeveruzhinji, huma thermometers inofanira kuona zvakanyanya. Zvinowanzoonekwa kuti tembiricha yehuma yakakura kupfuura kana yakaenzana ne38 degrees sefivha.
Iyo tembiricha pfuti inoyera tembiricha yeganda rehuma kuburikidza nemwaranzi infrared, uye tembiricha yehuma inokanganiswa nyore nekunze kwezvakatipoteredza. Kazhinji kutaura, kurongeka kwekuyera kwekushisa kunowedzera kuipa. Usabata huma yako panguva yekuedzwa. Kudikitira kana dermatitis pahuma zvinokanganisa mhinduro dzebvunzo.
03 mercury thermometer
Paunenge uchishandisa, zunza mercury kusvika pasi pe 36-degree mark. Muhapwa ngaurambe wakaoma wousunga kwemaminetsi anopfuura mashanu. Zvinowanzoonekwa kuti tembiricha yeaxillary yakakura kupfuura 37.5 madhigirii sefivha.
Ehe, mercury thermometers zvakare ine zvikanganiso. Iyo thermometer ichaputswa, izvo zvichaita kuti mercury ibude kunze. Iyo haina kusimba uye inotsvedza, izvo zvinozoita kuti mercury iwedzere. Pane njodzi huru yekuchengeteka. Hazvina musoro kubviswa. Kugadzirwa kuchamiswa muna 2020. Saka hazvikurudzirwe kutenga.
04 Electronic thermometer
Matemometa emagetsi akakodzera mathermometers emumba uye anotsiva ma mercury thermometers. Nzvimbo dzekuyera dzinoshandiswa rurimi rwemuromo, armpit, anorectum. Economical, safe, uye diki tembiricha kuchinja. Asi usashandise iyo imwechete thermometer yezvikamu zvakasiyana zvemudiwa wako.
Chokwadika, mipimo yefivha yenhengo dzakasiyana-siyana dzomuviri yakasiyana, yakadai setembiricha yomukanwa
Izvo zvisingabatsiri ndezvekuti nguva yakayerwa yakareba uye mwana anowedzera ruzha. Inofungidzirwa kuti haizogara kwenguva refu.
Nguva yekutumira: Zvita-07-2021